PressReader - Ilanga: 2017-09-11 - Kuphele ukuchoma kowaseGoli emuhluzwa ngowaseKZN
Kuphele ukuchoma kowaseGoli emuhluzwa ngowaseKZN
Uyise ugcine esetatazela okomuntu owosa ithumbu ziyinetha indodana
Ilanga - 2017-09-11 - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE
KUPHELE ukuchoma kuBrandon Thysse waseGoli emukluzwa kabuhlungu nguNkululeko Mhlongo waseShowe empini yebhande leSouth African Junior Middleweight ngoMgqibelo ebusuku e-Emperor’s Palace, eGauteng.
UMhlongo nguyena obevikela leli bhande, futhi ukhombise ubungqwele kusukela ngomzuliswano wesibili kwaze kwaba uThysse ulanyulelwa ngunompempe ngomzuliswano we-10. UThysse uwunqobile umzuliswano wokuqala okumnike ithemba lokuba yingqwele kazwelonke ekubeni eqale isibhakela esikhokhelayo ngonyaka wezi-2015.
Ungene eringini enezimpi eziyisi-8 futhi ubesazinqobe zonke. Lokhu yikhona obekwenza abanye bakholwe wukuthi uzoshaqisa abaningi ngokuphuca uMhlongo lesi sicoco. Naye ubephumele obala ngokuthi sesifikile isikhathi sokuthi abe yingqwele kazwelonke. Nokho-ke uMhlongo uvele wenza okulula njengoba ebethatha isikhathi sakhe bese enemba ezimbanjeni. Ngemuva kwempi uMhlongo uthe ubazi ukuthi ukugxila ezimbanjeni kuzomqeda amandla uThysse. Ukuphendulwa kukaThysse isaka lokujima, kubukeke kunemba kabi enhliziyweni kayise u-Andre obelokhu ehla enyuka ngesikhathi sempi kucaca ukuthi ngathi zihlala kuyena ngqo izibhakela.
U-Andre ubeyibhokisa elihlo- nishwayo kuleli kanti ushiye kulo mdlalo ngonyaka wezi-2009. Uke waba yingqwele yebhande lakuleli leMiddleweight.
UMhlongo uthe akumxakanga ukubona uBrandon emhlasela ngokushesha ngomzuliswano wokuqala.
“Ngivele nganquma ukuqhubeka neqhinga ebesivele sisebenzela kulona ejimini. Ngingene eringini ngazi kahle ukuthi lo mfana akakaze ayilwe imizuliswano engaphezulu kweyisi-6. Bengazi kahle ukuthi ukumnemba ezimbanjeni kuzomkhathaza kanzima ngoku- nyuka kwemizuliswano. Ubehlonyekiswa ngabantu naye wazibona sengathi usekulungele ukuba yingqwele,” kusho uMhlongo abaphathi bakhe abadalule ukuthi usezogxila phesheya kwezilwandle ngoba kuyacaca ukuthi kalisekho ibhokisa angalwa nalo kuleli. UMhlongo useke walwa izimpi ezimbili eGermany wabuya eshwiba izandla.
Lo mqhudelwano ubuhlelwe yiGolden Gloves Promotions kaRodney Berman obegubha iminyaka engama-40 esemkhakheni wokuhlela izimpi.
UNKULULEKO Mhlongo waseShowe unikeze uBrandon Thysse waseGoli izifundo zamahhala zesibhakela evikela kalula ibhande lakuleli leSA Junior Middleweight ngoMgqibelo eGauteng.